Kpido: brian polster
Satọde, 27 Juun 2015 Sunday, June 28, 2015 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 3 nkeji N'ime oghere teknụzụ ahịa, enwere nnukwu ibu na sọftụwia dị ka Ọrụ na oke ịzụrụ ihe ịchọrọ na igbe. Ka oge na-aga, SaaS meriri ọnụ ahịa ụlọ ahụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ SaaS wepụrụ ka ha meriri ụlọ ahụ na ịzụta esemokwu mmefu ego. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ndị na-ere ahịa na-ahụ onwe ha n'ụzọ ọzọ. Eziokwu bụ na ụlọ ahụ na-aga n'ihu na ịbe ọnụahịa. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ya